अध्यादेश – Page2– Himalaya Television
आज बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार
२५ भदौ २०७८ काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । संसद भवन बानेश्वरमा दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न लागेको हो...
विरोधका बीच प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेश
२३ भदौ २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको तेस्रो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)को विरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ पेश गर्नुभएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त अध्यादेश पेश गर्न समय दिनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको नवौँ...
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटै रिट
३ भदौ २०७८ काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन रिट परेका छन् । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अनुप अर्याल, प्रवेश केसी, सकुन्तला भुसाल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर...
आज जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ?
२ भदौ २०७८ काठमाडौं । दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा साविकको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी पाँचवटा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । ती सबै व्यवस्था नेकपा एमालेबाट फुटेर नयाँ गठन हुने दलका लागि...
अध्यादेशको मारमा एमाले : अरुलाई हान्न ताकेको बन्चरो आफ्नै खुट्टामा (भिडियो रिपोर्टसहित)
२ भदौ २०७८ काठमाडौं । सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सबैभन्दा ठुलो मार नेकपा एमालेलाई परेको छ । यसअघि अन्य दल फुटाउन भन्दै यस्तै अध्यादेश ल्याएका केपी शर्मा ओली नै अहिले नयाँ अध्यादेशको प्रहारमा पर्नुभएको छ । पार्टी विभाजनपछिको...
अध्यादेश आएसँगै जसपा पनि विभाजित, जसपा लोकतान्त्रिक निर्वाचन आयोगमा दर्ता (भिडियो रिपोर्टसहित)
२ भदौ २०७८ काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आएलगत्तै आज जनता समाजवादी पार्टी पनि फुटेको छ । उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता पाएपछि दलविहीन अवस्थामा पुगेको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । जसपाबाट...
यस्तो छ आज जारी अध्यादेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था (राजपत्रसहित)
२ भदौ २०७८ काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलका २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आज जारी गर्नुभएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी
२ भदौ २०७८ काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । अध्यादेश अनुसार अब २० प्रतिशत सांसद...
संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलतः गगन थापा
२ भदौ २०७८ काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा थापाले संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु जसले गरे पनि गलत...
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी होला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१ भदौ २०७८ काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि अब धेरैको नजर राष्ट्रपति कार्यालयतिर सोझिएको छ । अध्यादेश जारी हुनासाथ नयाँ पार्टी बनाउने भनेर एमालेको नेपाल–खनाल समूह तयारी अवस्थामा छ । तर...